Mamolavola lalàna momba ny encryption data ho an'i Apple | Avy amin'ny mac aho
Raha nino izahay fa ny olana nanjo an'i Apple momba ny encryption data an'ny San Bernardino iPhone ary noho izany dia misy ny data encryption an'ny serivisy toa ny iCloud Tapitra izany, diso isika, ary any Etazonia dia misy volavolan-dalàna momba ny volavolan-dalàna izay manery ireo orinasa teknolojia hanana fitaovana mamela, efa navoaka raha toa ka mangataka azy ny fitsarana, hanafoana ny fampidirana ireo fitaovana na serivisy ireo.
Araka ny efa nolazainay taminareo, ny volavolan-dalàna izay efa omanina dia efa misy volavolan-dalàna efa naseho ampahibemaso mba hanombohan'ireo manampahaizana manokana momba izany. ary hametraka ny tsy fahombiazana na fifanoherana mety hitranga.
Ity volavolan-dalàna ity dia natolotry ny Senatera sy ny filohan'ny komity fitsikilovana Senat Richard Burr sy ny loholona ary ny filoha lefitra Dianne Feinstein ary izay kasain'izy roa tonta dia ny hahatakatra ny fangatahana. izay tadiavin'ny governemanta momba ny olana momba ny encryption data.
Araka ny efa fantatrao dia voalaza fa miasa mafy amin'ny fikirakirana ny rahona iCloud i Apple ka rehefa manakatona azy ny mpampiasa dia ilay mpampiasa izy ary tsy inona akory fa ny mpampiasa afaka mamaha ny fanafenana mifanentana aminy. Miaraka amin'izany, ny zavatra ho tratran'i Apple dia amin'ny alàlan'ny fiarovana ny angona azo avy amin'ny loharano ary tsy misy fomba famoahana azy ireo, tompon'andraikitra irery ny mpampiasa raha manambara ny lakile hanaovana izany izy na tsia.
Raha mijanona hamaky izay lazain'io volavolan-dalàna io isika dia afaka mamaky izany.
Ireo orinasa teknika dia tokony hihoatra ny fepetra fiarovana azy ireo mba hanomezana angon-drakitra voageja amin'ny manampahefana amin'ny fiteny "azo mazava" ara-bakiteny.
Azo antoka fa ho anao, mpanaraka ahy avy any Mac aho, ny fehezan-teny teo aloha dia tsy milaza aminao mihoatra noho izay novakianao, fa ho an'ireo orinasa toa an'i Apple dia misy dikany bebe kokoa izany ary ao anatin'ny fitoriana napetraky ny FBI an'i Apple tamin'io fotoana io sy tamin'ny farany dia nisintona izay nangatahina manokana dia izay ateraky ny volavolan-dahatsoratra ankehitriny. Ny tiana hambara dia ny dikan'io fehezanteny io dia izany ny angona takiana dia mety TSY voahary na ny orinasa hanafenana azy ary hamerina mamerina azy.
Ka toa misy ady ara-dalàna eo alohan'izy ireo ny orinasam-teknolojia izay mety hanery azy ireo, ankoatry ny famolavolana ny rafitr'izy ireo, hamorona fomba iray hanodinkodinana ny tenany raha takian'ny fahamarinana.
Ahoana ny hevitrao momba ny encryption data avy amin'ny orinasa teknolojia?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Ilay volavolan-dalàna izay manery ireo orinasan-teknolojia hamaha ny angon-drakitra dia efa manana ny drafitra voalohany
Ny milina famokarana ny Apple Watch manaraka dia handeha